Partiin Angoo irra jiru Mugabe misensummaa isaa irraa mulqan. - Gaachana Sabaa
Partiin Angoo irra jiru Mugabe misensummaa isaa irraa mulqan.
November 19, 2017 Gaachana Sabaa
Zimbabwetti Paartiin ZANU-PF, kan biyya bulchaa jiru, Robert Mugabe hoggansa paartichaa irraa buusuun bakka isaanii, itti aanaa isaanii kan torban lamaan dura taayitaa irraa harii’atan Mr Emerson Minangagwa muudeera.
Paartiin kunis Pirezident Mugabef hanga Wiixata boruu qofaa akka eeyyama ofiin aangoo gadhiisan kennuun yoo isaan didan seeraan akka aangoo irraa buusan murtee dabarsaniiru.
Pirezident Mugaben 93 yeroo ofii aangoo irraa bu’an haadha manaa isaanii Grace Mugabef aangoo dabarsuuf waan barbaadaniif itti aanaa isaanii karaa irraa gorsuuf aangoo irraa arihuun isaanii nii yaadatama.
Uuummani biyyattii Mugaben akka aangoo irraa bu’an gaafatan
Yeroo ammaa kana namoonni isaaniif amanamoon durii illee garagaluun akka aangoo lakkisan yaada fii dhiibbaa godhaa jiru.
Gama biraatiin waraanni biyyattii dhiibbaa guddaa irratti godhaa jira.Uummanni biyyattis hiriira garaagaraa godhaa jira akka Mugaben taaytaa irraa bu’aniif.
Mugaben akkaataa haalli kun itti deemaa jiru yoo danda’ame tursiisuu ykn ammoo akka yeroo aangoo gadhiisan tika isaa fii warra isaaf akka godhamu gaafachaa jira jedhamee shakkama.
Roobii darbe Major General Sibusiso Moyo,walgahii Mugabe waliin godhuun isaanii nii yaadatama sana booda waa’ee uummata biyyatti ilaalchisee “Uummanni Zimbabwe uummata Namuusaa fii tokkummaa qabu” jechuun gaazexessitootaaf duubatan.
Guyyaa har’aas mana mootummaa biyyattii keessatti hoogganoonni waraanaa fii Mugaben walgahii irra turuun isaanii dhagahamee garu itti baha isaa baruun hin danda’amne.
← Zimbabwe ruling party ZANU-PF party sacks President Mugabe
Loltoonni Liyyuu fii Federaalaa uummata aanaa Moyaalee irratti Lola bananiiru →
Somaliyaa magaala Moqaadishootti Boombiin nama 300 ol ajjeese
October 16, 2017 Gaachana Sabaa Comments Off on Somaliyaa magaala Moqaadishootti Boombiin nama 300 ol ajjeese
November 25, 2017 Gaachana Sabaa Comments Off on Yoo xiqqaate namoonni 230 ajjeefamanii 109 madaa’an Haleellaa Masgiida Masiri irratti